Hireen Sabboontotaa kalee fi har’as ODP keessatti tokkoma – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHireen Sabboontotaa kalee fi har’as ODP keessatti tokkoma
Hireen Sabboontotaa kalee fi har’as ODP keessatti tokkoma
Hireen Sabboontotaa kalee fi har’as ODP keessatti tokkoma.
Via Hamza Borana
Nammoonni Sabboonummaa qaban hardhas kaleessas mana OPDO/ ODP keessatti dhiibamaa turan. Pirezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Duraanii kan turan Obbo Alamaayyoo Atoomsaa nama Sabboonummaa oromoo OPDO keessatti biqilchaa turaniidha. Kuttannoof murannoon isaanii itti fufuu hin dandeenye. Yeroo gabaabaa keessatti karaa irraa maqfaman. oduun qorichaan ajeefaman jedhus jira. hamma amaatti namni dhugaa isaa gadi baase hin jiru. Sana booda gocha Sabboonummaa jabaa Oromoo keessatti kan gadi dhaabee Oromoo qabbaneesse obbo Lammaa Magrsaati. Innis bakka ummanni amaanaa itti kennate turuu hin dandeenye. sababa hardhas ifaa hin tahiniin Karaa irraa maqfameera.Isa qofaa miti fakkaattota isaas kanumatu isaan mudate.
Faallaa kanaa immoo namoota ummata Oromoo diina wajjiin dararaa,dhiiga ummataa xuuxaa turaniif, aangoon dabalameefi jijjiirama kanas olii gadi raasaa jiru.
Kanaafuu haala kanaan ODP’n maal haa jennuun ? garamitti waan deema jiran fakaata? Sabboonumma kana maalif irraa dheessu?
“Yaya akkami atii? Ani misensa koree godina tokkoti. Haasawa Lammaan Adamatti godhe nu boochisaa jira. Kaayyoon garee Lammaa butamuu isaa kanan bare guyyaa tokko Addisuu Araggaa fi Awwaluu Abdii sagantaa ICT irratti kallattiidhan ajaja nuuf dabarse akkas jechuun: miseensota paartilee mormituu hunda hidhaa, rukutaa keessattuu kan ABO Shanee fi KFO gidirsaa nuun jedhe. Yoo feete bulchitootaa fi kantiibota magaalaa gaafadhu. Akkasitti hojjedhaa jedhee ajaja dabarse. Abdiin dimokraasii dukkanaaa jiraachuu isa gaafas baradhe. Rabbi gara oromoo haa goru. post godhi.”
Dararaafi hidhaan akkuma itti fufetti jira. Namni kun #Yusuf #Lijabu jedhama; abbaa maatiifi nama mana isaaf dalagatuu dha. Godina Qellem wallaggaa aanaa d/sadii ganda Samarroo Baaroo jedhamu keessa jiraata.
WBO soorta ykn hariiroo WBO waliin qabda jechuun erga qabamee dararaan ulfaataa irraan gahamee booda gara mana hidhaatti darbatame. Erga hidhamee kunoo, baatiin afur darbee jira. Ajaja mana seeraa fi adeemsa seeraan alatti hidhaan gaggeeffamu hedduu hammaatee jira. Ummanni keenay karaa hundaan waliif tumsuu fi waliif birmachuu qaba!!
Gochi Duguuggaa Sanyii Gujii keessatti akuma itti Fufe jira.
Guyya hadha ( 25 / 9 / 2019) Godina Gujii, Aanaa Gooroo Doola Ganda Raarooti, RIB Namoota Nageya dhukaasa itti banuun Namoota hedduu fixxeerti.
Nami haga ammati dhumate Nama 17 oli jedhama jira, Dabalataan Namoonni Baay’een Reeffi isaan Bosonuma keessa aka argama jiru fi Manneen Baay’ee gubata jiran himama jira!
Mana Gubate Lama keessalle Ijjoolleen aka Jirtu himama jira!
( Ijooluma Woliin guban jedhama jira)
Haga Halkan kanaati Manneen baay’ee aka gubata jiraniif Sagaleen dhukaasa itti fuufe jira.
Namoota Dhumatanille Reeffi isaan aka hin fuudhamne RIB dhoogge jira, haga ammaati Laakkofsi Nama du’e Sirriiti beekkame hin jiru.
Oromoo Raajii Dhaga’aa wal dhageesisaa!!
Finfinnee 4kiloo #Inbox
Ganama har’aa Abiy Ahmed Office of the Prime Minister-Ethiopia Sirna Nafxanyaa duraanii Xoophiyaa takka, Afaan tokko, Amantii tokko Jadhu ijaaruuf Koreen nama 129 of qeessa qabdu hundeessuun borii irraa eegalee Caasaa diriirsuuf jacha gara Naannooleefi gara godina ni bobbaati jadhamaa jira. Kanamalees Baayyanni qashii Miliyoona 51 ol ramadameefii jira jadhamaa jirtu Oduun keessoo masaraa Mootummaa 4kiloo keessa dhufaa jirtu!! Osoo Gaaffiin ummata Oromoo deebbii hin argatiin Gaaffii ummata Oromootiif Oromiyaa dhabamsiisuuf yaaluun diinummaan kana caale hin jiruu Ummaatni Oromoo Qeerroon Oromiyaa Tokkummaa qabsoofne yeroo Sirna nama Nafxanyaa/Nama nyaataa hiddaan Oromiyaa keessa buqqaafnu amma!! Yeroon ODP/OPDOn baduu amma!! KA’II OROMOO KA’II QEERROON OROMIYAA
Ginbot 7 road-map State Structure for Ethiopian
Odeeffannoo kana namni Dhiigni qeerroo 6000 olii kana Bilisummaa Oromoof Walabummaa Oromiyaattif jacha wareegamte itti dhagayamu #Share godhuun ummata Oromoo hunda biraan ga’aa Waliif Dabarsaa!!
Sirnni nama nyaataan EPRDF/OPDO ni kufa!
Injifannoon kan ummata Oromooti Share
Garaagarummaan OPDO fi ODP Maali? Damee Boruu: Caamsaa 18, 2019 OPDOn yaroo duraa TPLFiin kan…